ब्लग:: Artha Dabali
धन ठूलो कि मन ?, डा. उपेन्द्र देवकोटासँगको मेरो तितो यथार्थ धन ठूलो कि मन ? ……………………….. अशोक दर्जी एउटा सानो वालक जसको गीत निकै चर्चित छः यो गीतमात्र नभएर समाजलाई एउटा गतिलो प्रश्न पनि हो । पैसा मुखी बन्दै गएको हाम्रो समाज कसरी विकृत भएको छ, त्यो छर्लङ्गै छ । त्यो चाहे शिक्षामा होस वा स्वस्थ्य, वा अरु कुनै पनि विषयमा । संसारमै विरलै देखिने भेन अफ ग्यालेन
१५ वर्ष लामो बीमा क्षेत्रमा देखिएको मेरो बुझाई करिब १५ वर्ष मैले जुन अवस्थामा बीमा बजार देखेको थिएँ । अहिले पूर्ण रुपमा भिन्न छ । बीमा क्षेत्रको दायरा विकास र यसले बनाएको परिचय पनि धेरै फरक छ । जुन अविधिमा मेट लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ र एलआइसी कम्पनीहरु थिए । मानिसहरुको धराणा बुझाई निकै कम थियो । कम्पनीको वृद्धिसँगै बीमा शिक्षा सचेतनाको